Feesbuukiin olaantummaa fi qoollifannaa warra adii dhorkuuf - BBC News Afaan Oromoo
Feesbuukiin olaantummaa fi qoollifannaa warra adii dhorkuuf
Goodayyaa suuraa Feesbuukiin kana booda sabboontummaa warra addii olaantummaan adda baasee akka hin ilaallee hime
Feesbuuk torban dhufaa irraa kaasee ergaawwan olaantummaa warra adii ''jajan, deeggaranii fi bakka bu'an fuula feesbuukii fi Insitaagraam irraa dhorkufi.
Akkasumas fayyadamtoonni feesbuukii jechoota mufachiisoo ta'an yommuu barbaadan gara dhaabbata harbeessitoota ittisu irratti hojjataniitti akka ergu hima.
Kubaaniyichis sabummaan wayita dhimmoota akka 'American Prid fi Basque separatism'' kanneen qaama eenyummaa ummataa murteessaa ta'een ilaalamu dhimma fudhatama qabuudha.
Garuu maxxansa biloogii gaafa Roobii baheetiin akka jedheetti, marii ji'oota sadiif miseensoota waldaalee siviilii fi akaadaamii'' waliin gaggeeffameen booda sabummaan warra adii 'haala hiikaa kennuun'' kan ''olaantummaa warra adii fi dhaabbile gareewwan jibbaatiin'' adda hin baafamu.
'Waa'ee nama barreessu qofaa miti'
Ministirri mummee Niiw Ziilaaand Jaakindaa Ardern akka jettuutti midiyaan hawaasaa 'waa'ee nama barreessu qofa osoo hin taane waa'ee nama maxxansuutii'' waan ta'eef itti gaafatamummaa achi keessatti kubaaniyichi qabu mul'isti.
Feesbuuk duraan vidiiyoon halleellaa kan badiinsa lubbuu namoota 50'f sababa ta'ee osoo hin haqamiin dura yeroo kuma afur ol ilaalamee ture.
Kubaaniyichis sa'aatii 24 keessatti koppiiwwan miliyoona 1.2 osoo maxxanfamaa jiruu dhorkuu fi kanneen 300,000 ammoo haquu hima.
Gareen Isilaamtoota Faransaayi bakka bu'uus, feesbuukii fi Yutube gochiichi akka maxxanfamu eeyyamuu isaaniif himataa turan.
Garee tekinolojii biraas vidiyicha buusuuf tarkaanffii fudhataa ture jedhame. Reddit foramii marii 'watchpeopledie' jedhamuun marsariitii isaaniirra ture erga maxxansa halleellaatiin booda dhorke.
Guyyuun lakkoofsi baay'ina namoota Feesbuukii fayyadamanii xiqqaataa dhufe